Sidina vaovao avy any Ontario mankany Austin amin'ny Southwest Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina vaovao avy any Ontario mankany Austin amin'ny Southwest Airlines
Tonga ny fanambarana ny sidina vaovao Andrefana Andrefana satria ny ONT dia mbola miaina fanarenana areti-mandringana mahavariana. Tamin'ny volana aogositra, ONT dia nitatitra fa ny fifamoivoizana mpandeha dia ao anatin'ny 7% amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID.
Southwest Airlines dia nanambara sidina vaovao avy amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena any Ontario mankany Austin, Texas.
Southwest Airlines dia hanolotra sidina isan'andro Ontario, California mankany Austin, Texas manomboka ny 10 martsa 2022.
Ny fanambarana Southwest dia vaovao miarahaba ny vavahady atsimon'i California sy ny Fanjakana Inland.
Ny fanambarana avy amin'ny Southwest Airlines fa ny mpitatitra vola lafo dia hanidina isan'andro tsy an-kijanona avy any amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i Ontario (ONT) mankany Austin (AUS) manomboka ny volana martsa 2022 dia vaovao miarahaba ny vavahady atsimon'i California sy ny Fanjakana Inland.
Southwest Airlines hanolotra sidina eo anelanelany ont ary Austin-Bergstrom International Airport isan'andro amin'ny fandaharam-potoana manaraka manomboka amin'ny 10 martsa 2022.
Flt # Origin Destination Departure Arrival Frequency fiaramanidina
1204 ont aus 10: 55 am 3: 35 ora Mon - Fri &
474 ont aus 9: 50 am 2: 30 ora Sat 737-700
1739 aus ont 4: 35 ora 5: 55 ora Mon - Fri &
257 aus ont 2: 55 ora 4: 10 ora Sat 737-700
Ireo sidina vaovao dia azo alaina avy hatrany
"Ny fanampiana ny renivohi-panjakana Texas ho an'ny sarintany misy anay dia mandray vaovao sy maneho fahatokisan-tena avy amin'ny mpitatitra fiaramanidina lehibe indrindra an'ny ONT," hoy i Alan D. Wapner, filohan'ny Vaomieran'ny Komisiona OIAA. “Famantarana iray ihany koa izao fa efa sitrana ny ONT tamin'ny aretin'ny COVID-19 ary efa mahazo vahana.”
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Ontario (ONT) no seranam-piaramanidina fitomboana haingana indrindra any Etazonia, araka ny Global Travel, izay boky navoaka voalohany ho an'ny flier matetika. Any amin'ny Fanjakana anaty tanety, ONT dia sahabo ho 35 kilaometatra atsinanan'ny afovoan'i Los Angeles ao afovoan'i California atsimo. Seranam-piaramanidina feno izy ity, izay, talohan'ny areti-mifindra coronavirus, dia nanolotra serivisy jet tsy miato amin'ny seranam-piaramanidina lehibe 26 any Etazonia, Mexico ary Taiwan.
Southwest Airlines Co., izay antsoina matetika hoe Southwest, dia iray amin'ireo zotram-piaramanidina lehibe any Etazonia ary ny kaompaniam-pitaterana vidiana ambany indrindra. Ny foiben-toerany dia any Dallas, Texas ary efa nandahatra serivisy ho an'ny toerana 121 any Etazonia sy firenena folo fanampiny.